Chii chekuita kana musika wekutengesa uchidonha? | Ehupfumi Zvemari
Chii chekuita kana musika wekutengesa uchidonha?
Ehezve, gore rino harisi iro rakanaka kwazvo kumisika yemasheya, ndoda vhiki ino yave kuda kupera. Iko kuderera mumisika yemari kwakaiswa nesimba risina kujairika nekuda kwekuti iyo kutengesa kumanikidza iri kuzvimanikidza pachayo zvakajeka pakutenga. Ese epasi rese masheya indices haana kunaka uye mashoma mashoma masheya ari kuramba kuraswa kwevatengesi kubva kumisika yemari. Muchidimbu, musika wakasviba wevashandisi vanoda kuita mari yavo kuchengetedza kuburikidza nechiridzwa ichi kuisa mari.
Iyo yakasarudzika indekisi yeSpanish stock market, iyo Ibex 35Parizvino gore rino, zvishoma pamusoro pe10% zvasara, nepo Eurostoxx 50 iri kusvika 9% kudzikira. Nemahara akafanana ndiwo masara akasara ekondinendi yakare akaona chikamu chakakosha kwazvo chemutengo wemugove wavo mumazuva mashoma. Kunyangwe chinhu chinonyanya kunetsa chechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati chinogara muchokwadi chekuti misika yezvemari yanga iri munzira yekudzikira, zvirinani munguva pfupi.
Chero nzira, zvese hazvina kurasikirwa kune vanoita mari uye kana vachishuva kuwana kudzoka pane zvavakachengeta, parizvino vane dzimwe nzira dzekudyara dzinogona kushanda zvakanyanya mukuzadzisa zvishuwo zvavo zvenguva pfupi. Zvichienderana neprofile yavanopa izvozvi sevatengesi: vane hukasha, vanochengetedza kana vari pakati nepakati. Nekuti izvo zvazviri parizvino kumisa kurasikirwa mune kwedu portfolio yekuchengetedzeka. Kune izvo zvatiri kuzoteedzera akateedzana emazano ekurarama mune ino bearish mamiriro emisika yemari.
1 Musika weStock unoderera: kushaya mari
2 Enda kune yakatarwa mari
3 Tora mukana wezvakagadzirwa zvigadzirwa
4 Zvimwe zvigadzirwa zvekutengesa pasi
5 Kubva papuratifomu yezvivakwa
6 Mipiro kubva ku1.000 euros
Musika weStock unoderera: kushaya mari
Iyo yakakosha uye panguva imwechete nzvimbo yakapusa ndeyekubuda mumisika panguva ino chaiyo. Kwete chete izvo zvinobatsira kuchengetedza capital yakatemerwa kudyara, asi zvinopesana ichave chishandiso chine simba kutora mukana weiyo mabhizimusi mikana izvo pasina kupokana ichaonekwa chero nguva. Kunyangwe kudzikira mumisika yemasheya kuri kushanduka kuri kuitika, hapana mubvunzo kuti pachagara paine chimwe chikumbiro chemusika wemari chinogamuchira kutenga. Mupfungwa iyi, musika wemasheya unogara uchikupa iwe mukana wekuita kuti mari inobudirira ibatsire.
Kana iwe uchida kuzadzisa izvi zvinangwa, hapana chinhu chiri nani pane kuve kunze kwemisika yemari izvozvi. Nekuti pane chinhu chimwe chete chechokwadi chekuti iwe uchafambira mberi uye ndiko kutenga masheya pamutengo unokwikwidza kupfuura uyo zvino unopihwa nemakambani akanyorwa. Mupfungwa iyi, hazvina musoro kuti unoita mashandiro pamusika wemasheya panguva ino iwe uchiziva kuti mumwedzi mishoma unenge uine iwo akadhura zvakanyanya. Zvisinei nekuti mumazuva anotevera zvinotarisirwa Krisimasi pati rally.
Enda kune yakatarwa mari
Imwe sarudzo yakapihwa nemisika yemari kushandura iyo yekudyara chip. Izvi mukuita hazvireve chinhu chishoma pane kuchinjana ma equity emari yakatarwa. Kunyangwe ayo makanika ari akasiyana zvakanyanya sezvo ichitongwa nemamwe mamodheru mukudyara. Asi zvirinani haungarasikirwi nemari uye iwe unowana a yakamisikidzwa purofiti uye yakavimbiswa gore rega, kunyangwe isingawanzo pfuura 1%. Kune rimwe divi, inogona kushanda senge bhiriji yekudyara kudzamara misika yequity yabuda. Nezvakanakira kuti iwe unenge usina mari yehupfumi pakubata kwayo, senge muenzaniso weyakagadziriswa-nguva bhangi dhipoziti.
Imwe bhenefiti yesarudzo iyi ndeyekuti pasina kupokana iwe unzvenga matambudziko uye haufanire kunetseka mazuva ano nezve shanduko yemisika yemari. Iyo inokutendera iwe kumwe kuzorora mumazuva ekunetsa kwakanyanya senge iwo ayo misika yemasheya iri kusangana pasirese pasirese. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi, isu tinosiya tsananguro yako kune imwe nguva yakafanira. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti iri kirasi yezvigadzirwa zvemari ichavandudza purofiti yavo mumavhiki anotevera semhedzisiro yekukwira kwenzvimbo munzvimbo yeyuro. Mune mamwe mazwi, inozove inokwezva kune vashoma nevepakati varimi.
Tora mukana wezvakagadzirwa zvigadzirwa
Imwe nzira ine hukasha mazuva ano ndeyekubvumirana kwezvinonzi zvinodzosera kumashure zvigadzirwa. Ndokunge, izvo zvinounza purofiti kana misika yemasheya ikadzika, sezviri kuitika panguva ino. Uye zvakare, hapana imwe chete yemhando yekudyara iyo inoshanda ino yakasarudzika hunhu, asi zvinopesana pane zvakawanda uye zve zvisikwa zvakasiyana-siyana, sezvauchaona pazasi. Nekudaro, ivo vakaomesesa sezvo ivo vachida ruzivo rwakadzama rwemisika uye yavo vega mari yekudyara.
Chakareruka pane zvese i dzosera mari yekudyara zano ravo rakavakirwa pachokwadi chekuti iwe uchawana mari yakawanda sezvo kudonha mumisika yemari kwakadzika. Izvo zviri nyore uye zvinogona kukuita iwe kuti uwane mari yakawanda kupfuura iwe yaunofungidzira kubva pakutanga. Kunyangwe nekuda kwezvikonzero zvakafanana kune mari yakawanda yaunogona kusiya munzira. Nechikonzero ichi zvakagadzirirwa kune yakasarudzika nhoroondo yevatyairi, umo hukasha hunokunda pamusoro pezvimwe pfungwa.
Zvimwe zvigadzirwa zvekutengesa pasi
Mari idzi dzekudyidzana handidzo chete chikonzero chekuti iwe ugone kushanda nemusika wekutengesa uchidzika. Iwe zvakare unayo iyo chikwereti kutengeswa asi chero bedzi iwe uchiramba uchifunga kuti icho chigadzirwa chemari chine leverage. Uye izvi zvinoreva kuti kune njodzi zhinji dzauchazotora neichi chitsva uye chakakosha chikumbiro chemusika wemasheya. Asi pamusoro pezvose, ive shuwa kuti mugove pamusika wemasheya unenge uchikudziridza yakanyatsotsanangurwa downtrend. Nekuti kana zvisiri, mhedzisiro inogona kuve inopesana nezvako zvaunofarira.
Zvimwe zvinogadzirwa zvinosanganisira hunhu muhomwe ndeizvi: derivatives, asi mune ino kesi ine hukasha hukuru kana zvichibvira. Iyi sisitimu inongochengeterwa varimi chete vanopa ruzivo rwakawanda murudzi urwu rwezvakanyanya mashandiro uye vanogona kurasikirwa nemari yakawanda kana zvinotarisirwa zvisina kuzadzikiswa pakupedzisira. Chimwe chinhu chinogona kupokana kuitika, kunyangwe iwo maitiro emusika wemasheya ari pachena bearish panguva ino. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yedzimwe nzira dzinopihwa nemisika yemari kuti ishande nemusika wekutengesa uchidzika.
Kubva papuratifomu yezvivakwa
Iwe unogara uine mukana wekupedzisira kuyedza izvo zvinonzi real estate mapuratifomu ayo anotendera iwe kuisa mari mune chero eawo mapurojekiti. Ndiyo imwe yemhando dzekudyara dziri kusimuka panguva ino nekuda kwehunhu hwayo. Kubudikidza nerudzi urwu rwekudyara iwe unogona kuwana kudzoka pane yako mari ye pakati pe6% ne10%. Kunyangwe iwe uchifanira kutevedzera nguva yekugara iyo inogona kuwedzerwa kusvika pamwedzi gumi nemashanu kana oparesheni yapera. Kune rimwe divi, ine mukana wakakura wekuti iwe haufanire kutarisana nechero mhando yemakomisheni kana imwe mari mukutarisira kwayo.
Chero zvazvingaitika, unogona kusarudza pakati pezvakawanda zvivakwa mapurojekiti, ayo anogona kunge achiwanikwa kwete kwete chete munyika jogirafi, asi kune dzimwe nyika dzakavakidzana. Pamusoro pezvose, kuzadzisa ichi chishuwo mukudyara, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekusarudza real estate chikuva uine zvizere zvinovimbisa uye kuti zvakanyoreswa nemazvo. Hazvishamise kuti kupindira ndeimwe yevavengi vakuru veichi chikamu chakatanga kukura muSpain. Kunyangwe panguva ino izvo zvirevo zvekudyara zviri padanho uye vashoma kwazvo.
Mipiro kubva ku1.000 euros
Chero zvazviri, iwe unogona kudzivirira iyo yakaderera purofiti inopihwa nemabhangi zvigadzirwa panguva ino. Uye pasina kufunga, kune rimwe divi, njodzi dzinotorwa kubva muzvigadzirwa kubva kuequities. Kunyangwe izvi iwe unofanirwa kupaka mari yako kwemwedzi yakati wandei. Kuburikidza neiyi fomati yekudyara iwe unogona kuita mipiro yekuchengetedza inokwanisika kwazvo yehomwe dzese. Kubva ku1.000 euros iwe unozokwanisa kupinda mune aya mapuratifomu uye nehurefu izvo zvichasiyana zvichienderana nehunhu hwemakambani matsva aya.
Iyo imwe nzira yekunzwisisa kudyara uye mune iyi kesi haina njodzi kana. Pakati pevamwe, kuti kudzoka kwekushanda pamagumo hakusi iko kwakambosimbiswa uye kunogona kudonha nezvikamu zvishoma muzana zvine chekuita nechikumbiro chekutanga. Pasina kutaura kuti icho chigadzirwa chisingatenderi iwe kuti udzikunure, kana kusarura kana kukwana, asi zvinopesana, unofanirwa kuchengetedza kudyara kusvika pakukura kwayo. Ndokunge, kudzamara kupera kwekuvhiya uko iyo real estate projekiti ichagara. Aya ndiwo mamiriro ako ekuti ubvumire mafomati aya ekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chekuita kana musika wekutengesa uchidonha?
Ndine mari ndakaisa mari mumusika wemasheya uye ndatotadza yakawanda. Zvandinoita? Ini ndinotengesa? kana pane sarudzo yekurasikirwa kushoma?
Ndeupi mubatsiri chaiwo wekuwana capital?